४७ लघुवित्तको चौथो त्रैमास रिपोर्टः ४५ मुनाफा बढ्दा दुई वटाको घट्यो, कसको कति ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार १४:४४
२५ भदौ, काठमाडौै । लघुवित्तहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनकि गरेका छन् । विवरण सार्वजनिक भएका अधिकांशको मुनाफामा बढोत्तरी देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै मुनाफा गर्नेमा छिमेक लघुवित्त रहेको छ । छिमेकको मुनाफा ८७.२४%ले बढेर १ अर्ब २१ करोड ५६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । डिप्रोक्स लघुवित्तले ७१ करोड ३७ लाख २९ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेकाे छ ।
यसअवधिमा ४५ कम्पनीको मुनाफा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा नाडेप लघुवित्त रहेको छ । नाडेपको खुद नाफा ८३६९.११% ले बढेर १५ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा आरएमडीसी र घोडीघोडा लघुवित्तको मुनाफा भने घटेको छ ।
कुन लघुवित्तको नाफा कति ?
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १ अर्ब २१ करोड ५६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६४ करोड ९२ लाख ४० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका यस लघुवित्तले सञ्चालन मुनाफा ५१.८३ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ३२ करोड २० लाख ९ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा सञ्चालन मुनाफा ८७ करोड ७ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा लघुवित्तले ५७ करोड १३ लाख २९ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ ।
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ९१ करोड ९१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २८ करोड ४३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै संस्थाले कर्जा सापटी ६ अर्ब ३२ करोड पुर्याएको छ भने सदस्यहरुबाट उठाउनुपर्ने निक्षेप पनि १८.५७ प्रतिशतले बढाएर १५ अर्ब ८१ करोड पुर्याएको छ । संस्थाले २४ अर्ब ७ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ ।
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मुनाफाआर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७२.६६ प्रतिशतले मुनाफा बढाएका हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्र मुनाफा आर्जन गरेको थियो । संस्थाको सञ्चालन मुनाफा समेत बढेर १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी २६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । चुक्तापुँजी २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाले ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेकाे छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले गत वर्ष ३१ करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा ३४ करोड ५४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले ६ अर्ब १६ करोड २६ लाख २ हजार कर्जा लगानी गरेको छ ।
सिभिल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ६ करोड ५४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको मुनाफा १ करोड १३ लाख ९५ हजार थियो । संस्थाको सञ्चालन नाफा ९ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, जगेडा कोष पनि १३ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपेयामा पुगेको छ ।
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चौथो त्रैमाससम्मको ६८ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । लघुवित्तको चुक्तापूँजी ६० करोड ८४ लाख रहेको छ भने जगेडाकोषमा १ अर्ब ३० करोड ९४ लाख भन्दा बढी रहेको छ ।
एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म १९ करोड ८७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म कम्पनीले ७ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ५३ करोड ९८ लाख ५ हजार रूपैयाँ रहेको छ भने १ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । संस्थाको जगेडा कोषमा ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ११ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । संस्थाको सञ्चालन मुनाफा समेत बढेर १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी समेत बढेर ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद नाफा २ करोड १८ लाख ९५ हजार थियो । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५५.४३ प्रतिशतले बढेको छ । लघुवित्तले सम्भावित जोखिम व्यवस्थामा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ यस्तै, ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ ।
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म १९ करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म ६ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा १९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी ३२ करोड ४५ हजार रहेको छ । कम्पनीले ६ अर्ब १६ करोड ३६ लाख ६१ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ भने २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख ४२ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १० करोड ५६ लाख ५ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४८.७४ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ४ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । लघुवित्तको सञ्चालन मुनाफा ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ ।
स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ६१ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ ।
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले समेत चौथो त्रैमासमा आइपुग्दा ९ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ४७ लाख १३ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी १० करोड पुगेको छ । यस्तै, ३ अर्ब ३३ करोड ६७ लाख ८५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म १६ करोड ५ लाख ३९ हजार मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा कम्पनीले २ करोड ९ लाख ३६ हजार नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष खुद नाफा ६६६ दशमलव ८१ प्रतिशत बढीे हो । संस्थाको जगेडा कोषमा २९ करोड ४८ लाख ४३ हजार रहेको छ । कम्पनीले १ अर्ब ६३ करोड ५० लाख ६७ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ११ करोड ७० लाख ९५ हजार मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधि कम्पनीले ३ करोड ९५ लाख १३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । चुक्ता पूँजी २५ करोड ६९ लाख ८० हजार रहेको कम्पनीले संचालन मुनाफा १५ करोड २० लाख ७१ हजार आर्जन गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा १३ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चौथो त्रैमाससम्म १५ करोड ४३ लाख २१ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६९।६३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । चुक्तापुँजी ४१ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाले ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ ।
डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चौथो त्रैमाससम्म ७१ करोड ४३ लाख मुनाफा, साना किसान लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म ६१ करोड ४९ लाख, फवार्ड लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म ५७ करोड ४६ लाख, एनआईसी एशिया लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म ५६ करोड ४७ लाख, मेरो माइक्रोफाइनान्सले चौथो त्रैमाससम्म ४४ करोड ४२ लाख, ग्रामिण विकास लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म ३५ करोड ९५ लाख, आरएमडीसी लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म २३ करोड २५ लाख, मिर्मिरे लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म २० करोड, नेरुडे लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म १८ करोड २३ लाख, नाडेप लघुवित्तले १५ करोड ६८ लाख, किसान लघुवित्तले १४ करोड ९० लाख, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले १५ करोड १५ लाख, इन्फिनिटी लघुवित्तले १२ करोड ६० लाख, समिट लघुवित्तले ११ करोड ९८ लाख, विजय लघुवित्तले ११ करोड ८४ लाख, सबैको लघुवित्तले ११ करोड ४३ लाख, समता घरेलुले लघुवित्तले १० करोड ८३ लाख र नयाँ सारथि लघुवित्तले १० करोड ५८ लाख मुनाफा गर्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै, महुली लघुवित्तले ९ करोड ८० लाख मुनाफा गरेको छ । साथै, उन्नति सहकार्य लघुवित्तले ९ करोड ४९ लाख, आरएसडिसी लघुवित्तले ९ करोड १० लाख, मिथिला लघुवित्तले ५ करोड ६१ लाख, कालिका लघुवित्तले ५ करोड ५२ लाख, जनउत्थान लघुवित्तले ५ करोड ३२ लाख, गणपति लघुवित्तले ४ करोड २१ लाख, सपोर्ट लघुवित्तले ३ करोड ३१ लाख, मनकामना रुमार्ट लघुवित्तले ३ करोड २२ लाख, नेपाल ऐग्रो लघुवित्तले २ करोड ९९ लाख, गुँरास लघुवित्तले २ करोड २० लाख, सामुदायीक लघुवित्तले १ करोड ७३ लाख र नेपाल सेवा लघुवित्तले ७८ लाख मुनाफा गरेका छ ।
मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई कर्जा प्रवाहमा सहुलियतदेखि उपत्यकामा कर्पोरट कार्यालय खोल्न पाउने